आउँदैछ अब १४८ मेगापिक्सेल क्यामरा भएको स्मार्टफोन ! « Pariwartan Khabar
आउँदैछ अब १४८ मेगापिक्सेल क्यामरा भएको स्मार्टफोन !
२८ फाल्गुन २०७५, काठमाडौँ
शाओमीको रेडमी नोट सेभेन प्रोको ४८ मेगापिक्सेल क्यामरा होस् वा नोकिया नाइन प्योरभ्यूको पाँचवटा क्यामरा सेटअप होस, स्मार्टफोन फोटोग्राफीमा नयाँ आयाम थपिएको छ । स्मार्टफोन क्यामराको यो प्रगति रोकिनेवाला छैन ।
अब स्मार्टफोनमा छिटै नै १ सय ९२ मेगापिक्सेलको क्यामराबाट फोटो खिच्न पाइनेछ ।
क्वालकोमले सार्वज्रिक गरेको चिपसेटको नयाँ स्पेसिफिकेसन्स विवरणमा सिंगल तथा डुअल क्यामराको क्षमतालाई छुट्टाछुट्टै रुपमा उत्कृष्ट ढंगले पेश गरिएको छ ।
यसमा स्लो मोसन रेकर्डिङ्ग लिमिट्स तथा हाइब्रिड अटोफोकस जस्ता कैयन् फिचर्स पनि रहेको प्रष्ट हुन्छ । यतिमात्र होइन अपडेटेड स्पेसिफिकेसनको सूचिमा फ्रेमरेट, मेगापिक्सेल, कोडेक सपोर्ट तथा रिजोलुसन लिमिटेन्स जस्ता कैयन् फिचर्सका बारेमा पनि जानकारी दिइएको छ ।